I-Induction Brazing Carbide Tip on Izinsimbi Zokusika Izinsimbi
Umkhiqizi ohamba phambili wamathuluzi wokusika we-CBN ne-PCD ufuna ukukhulisa umkhiqizo wabo nge gxilaIng ukushisa on indawo encane kakhulu ukuze ukunciphisa ukulahleka kokushisa futhi uthuthuke a ukukhishwa kwe-carbide inqubo.
Inqubo Ye-Induction Brazing:
Ikhasimende linikeze ngomzimba wensimbi onxantathu, uhlangothi ngalunye ~ 16.5 mm (0.65 amayintshi). I- induction brazing carbide tipping kufanele yenziwe ngo-3 mm (0.11 amayintshi) unxantathu olinganayo onqenqemeni. Indawo yokushisa yomzimba wensimbi yensimbi ingama-43 mm (1.69 inches) OD x 25 mm (0.98 inches) ubude. Uhlelo lwe-DW-UHF-6kW-II lokushisa lokungeniswa lusetshenziselwe ukufinyelela i-1600 ° F (870 ° C) nokuqedela inqubo ngemizuzwana eyi-8. Ikhoyili eyenzelwe ngokwezifiso igxilise ukushisa endaweni yokuthwebula i-carbide nesikhathi esincane somjikelezo.
Izinsiza kusebenza ze-Induction Brazing:
I-DW-UHF-6kW-II uhlelo lokushisa lokungeniswa ngenziwa ngezifiso lokungeniswa briling coil isetshenziselwe ukulingana nezidingo zenqubo.
Industry: Amathuluzi Nemishini
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi ukugqolozela, ibhande le-carbide, Ukudonsa i-Carbide Carbide, amathuluzi okusika wokukhipha i-carbide, ukungeniswa kwe-brazing, amathuluzi okusika we-brazing, hf ukugqolozela, Ukukhishwa kwesibalo, Ukukhishwa kwe-Induction Brazing Carbide, i-induction brazing cutting steel, amathuluzi okusika we-induction brazing Imeyili kwemikhumbi